कोरोनाभाइरस यौन सम्पर्कबाटसर्छ कि सर्दैन ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
कोरोनाभाइरस यौन सम्पर्कबाटसर्छ कि सर्दैन ?
विश्वनै कोरोना संक्रमणको शिकार भइरहेको बेलामा कोरोना संक्रमण हुने माध्यमका विषयमा विभिन्न तर्कहरु सुनिएका छन् । संक्रमणका माध्यमका बारेमा विज्ञहरुले जानकारी गराएपनि अझैपनि खोज अनुसन्धान भने भईरहेको छ ।
यौन सम्पर्कबाट कोरोना सर्छ कि सर्दैन भनेर खास प्रश्न राखेको पनि पाइदैन । तर कोरोना भाइरस सरुवा भाइरस भएकाले यौन सम्पर्कबाट सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्न भने प्रत्येक मान्छेमा रहेको पाइन्छ । मनमा सोचेपनि संकोचका कारण बाहिर कसैसँग नसोधेको पनि भेटिएको छ ।
डा एलेक्स जर्ज भन्नुहुन्छ: यदि तपाईँ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ र त्यो मानिससँगै बस्नुहुन्छ र एउटै वातावरणमा रहनुहुन्छ भने तपाईँले यौन व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्दैन। तर यदि तपाईँहरूमध्ये एक जनामा कोरोनाभाइरसको लक्षण देखिएको छ भने तपाईँले घरमै पनि एकान्तवासमा बस्नुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो त घरभित्रै पनि सबै जना एकअर्काबाट दुई मिटरको दूरीमा बस्नुपर्छ तर त्यो सधैँ सम्भव नहुन सक्छ।
एलिक्स फक्स भन्नुहुन्छ : आफूलाई लक्षण देखिँदा आफ्नो सहवासीलाई पनि देखिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। यदि तपाईँलाई लक्षण देखिएको छ भने टाढा रहनु नै उचित हुन्छ।
डा एलेक्स जर्ज भन्नुहुन्छ : म यो अवस्थामा नयाँ मानिससँग यौन सम्पर्क राख्ने सल्लाह दिन्नँ। किनभने त्यसो गर्दा कोरोनाभाइरस सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
एलिक्स फक्स : के नबिर्सिनुहोस् भने कोरोनाभाइरस भएका केही मानिसहरूमा लक्षण देखिएको हुँदैन। त्यसैले तपाईँ एकदमै ठिक देखिनुभएको छ भने पनि तपाईँबाट अरूमा चुम्बनबाट पनि भाइरस सर्न सक्छ। बेलायतका डा एलेक्स जर्ज चिकित्सक हुन् भने यौन विषयमा पत्रकारिता गर्ने एलिक्स फक्स बीबीसी रेडिओकी पूर्वप्रस्तोता हुन्।
प्रकाशित मिति : आश्विन २४, २०७७ शनिबार ६ : ०६ बजे